မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်: ၁၃၇၇ ခုနှစ် အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၁)
နှစ်သစ်တစ်ခုဖြစ်သည့် ၁၃၇၇ခုနှစ်ကတော့ …ရောက်ရှိလို့ဖြင့် လာပါလေပြီ။
ကျွန်တော် စာမရေးနိုင်ဖြစ်နေခဲ့သည်မှာ ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။ ဒီတစ်နှစ်တော့ စာကြွေးများ ၊ ဟောစာတမ်းကြွေးများ ကျားကုတ်ကျားခဲ ကျွန်တော် ပြန်ဆပ်ရပါမည်။ ယခု …………နှစ်သစ်ဖြစ်သည့် ၁၃၇၇ခုနှစ် အကြောင်း မဟာဘုတ်ရှုထောင့်အမြင်မှ တင်ပြပေးသွားပါမည်။
သည်တစ်နှစ်မှာ တော့ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် (နေမင်း) ဟာ မရဏဌာနမှာ ရောက်ရှိလို့လာပါတယ်။ ဒီအနေအထားသည် …ကမ္ဘာပေါ်မှာ သယံဇာတ ပြုန်းတီးမှု ပြဿနာအချို့ ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်ပေါက်လာစေ နိုင်သည့် အနေအထားကို ဖော်ပြပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအချို့ ..စီးပွားရေး အရ ကြီးမားစွာ ထိခိုက်မှု ရှိလာနိုင်သည့် အနေအထားတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အနေအထား မှာလည်း…မကြုံစဖူး ထူးခြား ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ သမာရိုးကျ ပုံမှန် စီးပွားရေး ကဏ္ဍအချို့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင် မရတော့ဘဲ ရပ်ဆိုင်းပစ်ရမယ့် အနေအထားတွေ ပေါ်ပေါက်လာပါမယ်။
လူသားတွေဟာ သည်တစ်နှစ်မှာ …ပုံမှန်လုပ်ဆောင်လာရသော လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေကို မုန်းတီးငြီးငွေ့ လာကြပြီး ၊ လမ်းကြောင်းသစ်တွေ ၊ နည်းပညာသစ်တွေ ၊ စနစ်သစ်တွေကို တောင့်တလာကြပါမယ်။ အလွန်အရေးကြီးလှတဲ့ သည့်အချက်ကြောင့်ပဲ နိုင်ငံများစွာမှာ စီးပွားရေး ၊ နိုင်ငံရေး ၊ ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ …နည်းလမ်းသစ်များ ပေါ်ပေါက်လာပါမယ်။ နဂိုသွားနေကြ ပုံမှန်လမ်းကြောင်းကနေ သွားလို့ ဘယ်လိုမှ မရတော့တဲ့ အခြေအနေတွေကိုလည်း ရင်ဆိုင်လာကြရပါလိမ့်မယ်။ လူတွေမှာ ကိုယ်ဆီနာမည်ရှိကြသလို…ထိုနာမည်အလိုက် အကျိုးအပြစ်တွေလည်း ကွာခြားကြပါတယ်။
ထို့နည်းတူစွာပင် …နိုင်ငံများစွာမှာလည်း …နိုင်ငံအမည်ကိုယ်စီ ရှိကြပြီး ထိုနိုင်ငံအမည်အများ အလိုက် ကောဇာနှစ်အပြောင်းအလဲမှာ …ထူးခြားသောအပြောင်းအလဲများ ထပ်တူလိုက်ပါလာကြပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် သည်တစ်နှစ်မှာ အမေရိကန် နိုင်ငံလို ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံမျိုး ရဲ့အမည်ဟာ မဟာဘုတ်ပက္ခလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ တည်ရှိနေပြီး ….တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် အထူးအားနည်းသော နိုင်ငံအမည်အဖြစ် တွေ့ကြရပါမယ်။ နိုင်ငံရေးဗေဒင်ကို … ခုနှစ်ခုစား မဟာဘုတ်ပညာနဲ့ ဟောလို့ ရပါ့မလားလို့ သံသယ ရှိစရာကောင်းပေမယ့် …ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ ….သည်တစ်နှစ်မှာ အမေရိကန်လို နိုင်ငံမျိုးဟာ …တနင်္ဂနွေအားနည်းမှုကို မုချရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ …သဘာဝစွမ်းအင်နဲ့ သယံဇာတ ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေ၊ အခက်အခဲတွေ ပိုမို ကျရောက်လာပါမယ်။ ထိပ်ပိုင်းအဆင့် ခေါင်းဆောင်အချို့ …နုတ်ထွက် ရခြင်း၊ အနားယူရခြင်းတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပြီး သဘာဝဘေးအန္တရယ်များစွာကိုလည်း အမေရိကန်နိုင်ငံအဖို့ ရင်ဆိုင်ရဖို့ အလားအလာတွေ ရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ထို့နည်းတူစွာ မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း ဘင်္ဂ+ဘင်္ဂ ပက္ခလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရပ်တည်လာရချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကတော့ လက်ရှိခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအဖို့ …ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ ပြဿနာတွေ ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပြီး၊ နိုင်ငံမှာ ပညာရှင် လိုအပ်ချက်တွေ အများအပြား ပေါ်ပေါက် လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် …ဒီတစ်နှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကို ပြည်ပက ပညာရှင်တွေပါ အများအပြား ဖိတ်ခေါ်လာရနိုင်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ ထို့အတူ ကြီးမားတဲ့ ပညာရေးရာ အပြောင်းအလဲတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ပါပဲ။ (လက်ရှိလဲ တာစူနေပြီ ဖြစ်တဲ့အချက်ဖြစ်တာကြောင့် …အသေးစိတ် မရေးလိုတော့ပါ။)
တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် မရဏဌာန မှာရပ်တည်နေသော ယခုလို ကောဇာနှစ်မျိုးဟာ ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်းမှာ ရှိတဲ့ အကြီးအကဲများ ခေါင်းဆောင်များကို အနားယူရတတ်စေသော၊ နှုတ်ထွက် ရတတ်စေသော၊ သေဆုံး ရစေတတ်သော နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ကတော့ ရွက်ဟောင်းတွေ ကြွေချိန်ပါ။ နိုင်ငံများစွာမှာ ဥပဒေရေးရာ အပြောင်းအလဲတွေ၊ ဥပဒေအချို့ ပယ်ဖျက်ရုတ်သိမ်းရခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါမယ်။ ဒါကြောင့် ….တော်လှန်ပြောင်းလဲလိုသူတွေအတွက်တော့ ….အခွင့်သာတဲ့ နှစ်မျိုးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
သမားတု သမားယောင်တွေ ပေါများတတ်ချိန်မျိုးဖြစ်သလို…ဆေးဝါးအတုများ ၊ ဥပဒေနှင့် မလွတ်ကင်းသော ဆေးဝါးများလည်း ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်းမှာ …ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာပါမယ်။ ဒါကြောင့် မိဘများစွာမှနေပြီး မိမိတို့သားသမီးများ အတွက် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကို စိုးရိမ်ပူပန်ရဖို့ အလားအလာရှိတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ပါပဲ။ ရေးသလောက်ကျယ်ပြန့်မယ့်ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်အနေအထားအရ ကံဇာတာကို သည်မျှနဲ့ရပ်ပြီး …တနင်္လာဂြိုဟ်အနေအထားကို ဆက်လက်လေ့လာကြပါစို့..။
တနင်္လာဂြိုဟ် (လမင်း) ကတော့ သည်တစ်နှစ်မှာ အဓိပတိဌာနမှာ ရပ်တည်လို့ဖြင့်လာပါတယ်။ တနင်္လာဂြိုဟ် အဓိပတိဌာနမှာ ရပ်တည်လာသည့် အင်အားကတော့ ………သည်တစ်နှစ်မှာ ..ပညာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာ တော်လှန်ပြောင်းလဲမှုများစွာ မုချပေါ်ပေါက်လာတော့မယ် ဆိုတာကို ညွှန်ပြလို့ဖြင့် နေပါတော့တယ်။ ကျောင်းတွေ၊ သင်တန်းတွေ အပြိုင်အဆိုင် မှိုလိုပေါက်လာပါမယ်။ တစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်း၊ သင်တန်းတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အားပြိုင်မှုတွေ များပြားလာပါမယ်။ အသင်းအဖွဲ့တွေ၊ ပါတီတွေ ဟာ မိုးဦးကျမှိုတွေလိုပဲ…အလျှိုလျှို ပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပြီး…တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်း အားပြိုင်အနိုင်လုလာကြတတ်ချိန်ပါ။
လူငယ်တွေကြားမှာတော့ တနင်္လာဂြိုဟ်ရဲ့သည်အနေအထားဟာ…ယာဉ်ကား ပြိုင်ပွဲများ၊ စတန့်ထွင်မောင်းနှင်မှုများ အလွန်များပြားလာစေမယ့် ဂြိုဟ်နေတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တတ်နိုင်သူ မိဘများ အနေနဲ့ မိမိတို့သားသမီးကို ယဉ်ကားမောင်းနှင်ရာမှာ မျက်နှာလွှဲခဲပစ်လွှတ်ပေးထားလို့ မရနိုင်တဲ့ နှစ်မျိုးပါ။ စက်ဘီးစီးနိုင်တဲ့ ကလေးငယ်တွေတောင် စက်ဘီး ပြိုင်နင်းဖို့ …အားပြိုင်လိုစိတ် ၀င်လာစေတတ်သော သည်တစ်နှစ်မှာ ယဉ်အန္တယ် ကဏ္ဍတွေလည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ထူထပ်ပေါများလာပါလိမ့်မယ်။
တနင်္လာဂြိုဟ်ဟာ ရေပြင်ကို အစိုးရသည့်ဂြိုဟ်လည်းဖြစ်တာကြောင့်….သည်တစ်နှစ်ထူးခြားချက်ကတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအချို့အနေနဲ့ ရေပိုင်နက်ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုတွေ မုချရင်ဆိုင်လာကြရပါမယ်။ ပဲခူးဆားလို နေရာတကာ ပါတတ်တဲ့ …မောင်အမေရိကန်ကြီးလည်း ..ဒီကံထဲမှာ ကြားညှပ်ပါနေဦးမှာ မြင်နေရပါတယ်။
တနင်္လာဂြိုဟ်ဟာ ရင်းနှီးသူများနဲ့ ဆွေမျိုးသွေးသားများကို ညွှန်းဆိုဖော်ပြသော ဂြိုဟ်တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်….မိမိတို့ချစ်လှပါပြီဆိုတဲ့ သူများ၊ တမိုးအောက်အတူနေသူများ၊ တစ်အူတုံဆင်းသွေးချင်းများ အချင်းချင်း …ရန်ပြုအားပြိုင်ရတတ်သော ကာလကို ဖော်ပြပါဆိုရင်ဖြင့် သည်ယခုလိုနှစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ …၁၃၇၇ခုနှစ်ကို ဖော်ပြရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် …. ဆွေမျိုးစုအတွင်း ဆိုင်ရာ အမွေလုပွဲများ၊ အားပြိုင်မှုများ၊ ရန်ပွဲများ ဖြစ်စေနိုင်သော သည်လိုနှစ်မျိုးမှာ မေတ္တာတရားကို ခါတိုင်းထက်…ပိုမိုထားနိုင်ပါမှသာ …အေးချမ်းကြပါလိမ့်မယ်။
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ …..ပုခက်လွှဲသောလက်များ ပိုမိုကြီးစိုးလာကြမယ့် သည်တစ်နှစ် ၁၃၇၇ခုနှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးအကြီးအကဲများစွာ ပိုမိုပေါ်ထွက်လာပါမယ်။ ဒါကြောင့် လေဒီတွေထွန်းပေါက်အောင်မြင်နိုင်သော နှစ်မျိုးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ပုရိသတွေ တစ်ဖြုတ်ဖြုတ် ကြွေတတ်ပြီး…. သုံးတောင်ဝတ်မိန်းမသားတွေ အစွမ်းပြလာတတ်သည့်နှစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့် .. အိမ်သူချစ်ဇနီးသော်မှ …မာမာပြောမိရင် …မကြုံစဖူး ခွန်းတုံ့ပြန်ရဖို့ကိန်း ရှိပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြရင်း……………………….
၁၃၇၇ခုနှစ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၂) မှာမှ ကျန်သည့်ဂြိုဟ်အနေအထားများနဲ့ ဟောကိန်းများကို ဆက်လက် တင်ပြဆွေးနွေးပေးသွားပါတော့မည်ခင်ဗျား။
ကိုစိုးခိုင် phone 09 318 17287
Posted by Sayarphone at 9:01 PM Labels: နှစ်စဉ်ဟောကိန်းများ